Home Wararka Sheekh Sh. Sheekh Muxuyidiin Celi oo magalaada Muqdisho ku geeriyooday
Sheekh Sh. Sheekh Muxuyidiin Celi oo magalaada Muqdisho ku geeriyooday
Allah ha u naxariisto, waxaa magaalada Muqdisho xalay ku geeryooday Sheekh Shariif Sheekh Muxuyidiin Celi, kaas oo ka mid ahaa culimada Soomaaliyeed ee muddo dheer ku howlanaa fidinta diinta Islaamka.
Geerida marxuumka, waxaa ka tacsiyeeyay masuuliyiin kale duwan oo xilal kasoo qabtay dalka iyo kuwa hada haya, kuwaas oo sheekha ku sifeeyay in uu ahaa Caalim Soomaaliyeed oo muddo dheer ku howlanaa fidinta diinta Islaamka.
Previous articleMuse Bixi oo kulan la qaatay K/xigeenka Xoghaya Guud ee QM
Next articleEscape from Mogadishu review – Koreans bolt through Somali war-zone chaos
Dibadbaxyo ka dhan ah Al-Sisi oo ka bilowday Masar
Askari Canadian ah oo loo heeysto dil muwaadin Soomaaliyeed!!